ကြုံတွေ့ချင်နေမိသည် – မြန်မာသတင်းစုံ
အဲဒီနေ့ကတော့ လူမရှိတဲ့ ရောင်းမဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ သူနဲ့ နမ်းဖြစ်ကြ သည် ..။ သူ့ပေါင်ကြားက မာနေတဲ့ လိင်တန် ကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ စန္ဒီ ပွတ်သပ်မိ သည် ..။ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုတ် လျာချင်းပွတ်လှိမ့် နေချိန် သူကလဲ စန္ဒီရဲ့ တင်သားစိုင်တွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဘဲ ဆုတ်ကိုင် သည် ..။ စန္ဒီ အဲဒီနေ့က သူ မလာခင် ပင်တီ ကို ချွတ်ထားခဲ့ သည် ..။ အိုး ..ဒါတွေ ပြန်မြင်ယောင်စဉ်းစားတော့ စန္ဒီရဲ့ သွေးတွေ ဆူဝေလာ သည် ..။ ကိုဌေး ကို မြင်ယောင်လာ သည် ..။ သူ စန္ဒီရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေး မှာဘဲလား …။ ကိုဌေးရဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီး နဲ့ ကြုံချင်တွေ့ချင်နေမိ သည် ..။ စိတ်တွေ က ဖေါက်ပြန်နိုးကြွနေ သည် ..။
ရေပန်းအောက် ထဲ ၀င်ပြီး ရေချိုးလိုက် သည် ..။ လက် က အလိုလို ပေါင်ကြားက မိမိရဲ့ အကွဲကြောင်းဆီကို ရောက်သွားရ သည် ..။ ဟင်း ….သူမအင်္ဂါစပ် သည် လိုလားတောင့်တနေ သည် ..။ ဟိုး အတွင်းထဲက ယားယံနေ သည် ..။ အင်္ဂါစပ် နှုတ်ခမ်းသား ထူထူလေးတွေ ကို သူမလက်ချောင်းတွေက စမ်းကိုင်နေရင်း ပွတ်မိလာ သည် ..။ ဆပ်ပြာ နဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို သေချာစွာ ပွတ်သပ် ဆေးကြောမိ သည် ..။ သူမ ရေချိုးရင်းလက်နဲ့လုပ်ရင်း ကိုဌေးကို အာယုံပြုလိုက်တော့ လက်ကအလိုလိုသွတ်လာလိုက်တာ ပြွတ်ကနဲပြွတ်ကနဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပေးနေရင်း ပြီးသွားပါလေရော။
နောက်နေ့အဆောင်ပြန်သွားရတော့ ကိုဌေးကိုမြင်တိုင်းရေချိုးရင်းလုပ်ခဲ့မိတာကိုသတိရပြီး ရင်တွေအရမ်းခုန်နေပြီး စန္ဒီရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကအလိုအလို စိုရွဲလာတယ် ဖီးတက်နေတာပေါ့။ အာမယ်သတိ လက်လွတ်ဖြစ်ပြီး ည သန်းခေါင်လောက်ကျရင် စန္ဒီရဲ့အခန်းထဲကို လာခဲ့ဖို့ကိုဌေးကိုပြောလိုက်မိမှန်းမသိပြောလိုက်မိပါလေရော . . . .ညသန်းခေါင်လာသောအခါ စန္ဒီရဲ့အခန်းထဲကို ကိုဌေးလာမယ့်အချိန်မှန်းပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး စောင့်နေသော ကိုယ်တုံးလုံးကြီး နဲ့စန္ဒီရဲ့ သဘာဝအတိုင်းပုံလေး တွေ့လိုက်ရ သည့် ကိုဌေးရဲ့ ပေါင်ကြားက လိင်တန်ချောင်းကြီး က အကြောတွေ ထောင်ထပြီး တောင်မတ်နေ သည် ..။
စန္ဒီ ကြည့်လိုက်သော အချိန်မှာ သူ့လိင်တန်ကြီး သည် ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွားတာ တွေ့လိုက်ရ သည် ။ “ အို..စန္ဒီလေးရေ ကိုဌေး..ကို စောင့်နေတာလား ..လာပြီ..လာပြီ …” ကိုဌေးသည် စန္ဒီ ဆီကို အပြေးကလေး ရောက်လာ သည် ..။ ကိုဌေးရဲ့ ပေါင်ကြားက လိင်တန်ချောင်းကြီး က အကြောတွေ ထောင်ထပြီး တောင်မတ်နေ သည်ကို စန္ဒီ လှမ်းကိုင်ကြည့်လိုက်ပြီး “ အို ..ကိုဌေးရယ်…မာတောင်နေလိုက်တာကွာ..စန္ဒီ လျော့ပေးမယ် နော် ..ကိုဌေး လာ လှဲလိုက်..” စန္ဒီ သည် ကိုဌေးကို ကြည့်ပြီး..“ ကိုဌေး ..ပုဆိုးချွတ်လိုက်ကွယ် ..”လို့ ပြောရင်း ကိုဌေးပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်လိုက်ကာ သူ့လိင်တန်ကြီး ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက် သည် ။
ဖြူဖွေး အချိုးကျတဲ့ စန္ဒီ ကို ကြည့်ပြီး ကိုဌေး သဘောကျကျေနပ်နေစဉ် စန္ဒီ လဲ ကိုဌေးရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို အရင်း ကနေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး သူမပါးစပ်လေး နဲ့ ငုံစုတ်လိုက်ပါတော့ သည် ..။ ကိုဌေး ရဲ့ လိင်တန်ထိပ်ပိုင်း ကို စန္ဒီ လျာ က ပတ်လည်မွှေ့ကစား နေသည် ..။ ကိုဌေး လိမ်တန်ထွာထွား ကော့ကော့ကြီးတွေ က ထိုးထိုး ထောင်ထောင် နဲ့ မြင်ရတာ စိတ်တွေ တဟုန်ထိုး ထကြွ လာရ သည် ။ကိုဌေးကသူ့လက်နှစ်ဖက် နဲ့ ရင်စိုင်တွေကို အားရပါးရ ဆုတ်ကိုင် ချေပေးနေ သည် ..။ စန္ဒီ ကကိုဌေးရဲ့ လိင်တန် အရင်းအထိငုံငုံစုတ်ပေးနေသလို သူ့ ဂွေးစိတွေကို သူမလက်တွေ နဲ့ အသာဆွဲလိုက် ပွတ်လိုက် လုပ်ပေးနေ သည် ..။
ကိုဌေးက စန္ဒီ ရင်စိုင်တွေကိုဆုတ်ကိုင်ရင်း သူမ ပါးစပ်ထဲ ကို ကော့ကော့ ထိုးထည့်ပေးနေသည် ..။ ကိုဌေး စန္ဒီရဲ့ကျွမ်းကျင် တဲ့ အစုတ် အယက်တွေ ကြောင့် ပြီးခါနီး ဖြစ်လာရ သည် ..။ အင်း..ပြီးလိုက်လို့ မဖြစ်သေးဘူး ..ဟုပြောပြီး ။ သူ လိင်တန်ကို စန္ဒီ ပါးစပ်ထဲက ဆွဲနုတ်လိုက် သည် ..။ ဒူးလေးထောက်ခါ စုတ်နေသော စန္ဒီ ကို ဆွဲထူလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ဖါင်းမို့မို့ အင်္ဂါစပ်ကြီးမှာ အရေတွေ တအားစိုရွှဲနေတဲ့အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို အမွှေးစုစုများများ နဲ့ တွေ့လိုက်ရ သည့်အခါ စန္ဒီ ကိုပေါင်ကားကာ ထိုင်စေပြီး သူ့လိင်တန်ကို သုံးလေးခါလောက် အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်းအတိုင်း အစုံအဆန် ပွတ်တိုက်လိုက် သည် ..။
သူ့လိင်တန်ထိပ်ဖူးတ၀ိုက်မှာ စန္ဒီ အင်္ဂါစပ် က အရေတွေ ပေလူးစို သွား သည် ..။ ပွင့်ဟနေတဲ့ သူမ နှုတ်ခမ်း ထူထူလေးတွေကို စုတ်ယူနမ်းရင်း လိင်တန် ကို သူမ အ၈င်္ါစပ်ထဲကို ထိုးသွင်းလိုက် သည် ..။ တထစ်ချင်း ဗြွတ်ကနဲဗြွတ်ကနဲ..စီးစီးကျပ်ကျပ်ကြီး ၀င်ရောက်သွား သည် ..။ စန္ဒီ ရဲ့ ပါးစပ် က ..“ အိ…..အ…..” ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်ပြီး သူကခါးကို လှမ်းဆွဲဖက် သည် ..။သူမ အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး တဆုံး ၀င်သွားတဲ့ လိင်ချောင်းကြီး က တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ..။ အရင်က အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာတောင် ကိုဌေး ရဲ့ တုတ်ခိုင်လှတဲ့ လိင်တန်ကြောင့်..သူမ အင်္ဂါစပ် မှာ ကာမရှေ့ပြေး အရေကြည်တွေ ရွှဲရွှဲစိုနေသည့်တိုင် ပြည့်တင်း နေ သည် ။
သုံးလေးချက် ခပ်ဖြေးဖြေး အသွင်းအထုတ်လုပ် ပြီး အရှီန်ယူကာ ..စန္ဒီ ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက် သည် ..။ အင်္ဂါစပ်ကြီးမှာ တပ်ရက်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ သူ့လိင်တန် ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး ခါးကိုကော့ကာ ဆောင့်လေတော့ စန္ဒီ လဲ တအားအား နဲ့ အရသာတွေ့လေပြီ ..။ ဆီးခုံချင်း တဖတ်ဖတ်ရိုက်ခတ်သံတွေ ထွက်လာသလို သိဒ္ဓိရဲ့ ဂွေးနှစ်လုံး က စန္ဒီ တင်ပါးတွေကြား စီးချက်မှန်မှန် ရိုက်ခတ်နေ သည် ..။ သူဆောင့်ထည့်နေတာ ကောင်းလွန်းလို့ အားအီး….အွန်း….အမလေး…..နာလိုက်တာ……ကောင်းတယ်ကိုဌေးရယ်…..စသည်ဖြင့်အော်ပေး နေသည် သူကလည်း စန္ဒီ ကအဲလို အော်လိုက်တိုင်း လိင်တန်တဆုံးဝင်အောင်ဆောင့်ထည့်နေ သည် ..။
မကြာခင်ဘဲ စန္ဒီ တအား ကောင်းလာပြီး… “ကိုဌေး..ဆောင့်..တအားဆောင့်ပေး…အီး..အမလေး ..ကောင်းလိုက်တာ..ဆောင့်ဆောင့်…နာနာဆောင့်…” လို့ တောင်းခံလိုက်တာ့ ကိုဌေး လဲ အားကုန် ဆောင့်လုပ်ပေးတော့ တာပေါ့”..။ ကိုဌေးလဲ စန္ဒီ ပြီးတော့မယ်မှန်းသိတော့မနေနိုင်တော့ဘဲ “ အိုး. ….အိုး …ကောင်း..ကောင်းသွားပြီ ..အို..ဟိုဟို …….” စန္ဒီ လဲ..တွန့်လိန်ကာ ..အထွတ်အထိပ် ကို တက်လှမ်းရောက်ရှိသွားပြီး ပြီးသွားသည် ..။ ကိုဌေး လဲ အရမ်းကောင်းနေပြီး ပြီးခါနီးဆဲဆဲ မို့ ဆက်ကြုံးကြုံးဆောင့်ထည့်ရင်း ..သုတ်တွေ တဖတ်ဖတ်နဲ့ စန္ဒီ အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်ကာ ပြီးဆုံးခြင်း ကို တက်လှမ်းသွားရ သည် …..ပြီးပါပြီ။
ခယ်မဆိုတာ လိုက်ပွဲတော့ မကြုံ ဖူးသေးဘူး မရီးကိုတော့ ဖုတ်လိုက်ရတယ် ကျွန်တော် နဲ့ ကျွန်တော့မရီးက ကျွန်တော့် ထက် အသက် တစ်နှစ်လောက် ပဲ ကြီးတယ် ဗျ ကျွန်တော့အစ်ကို ရဲ့ မိန်းမ လေ အစ်ကိုနဲ့ က အသက် ရှစ် နှစ်လောက်ငယ်တယ် နေတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခြံဝင်းထဲ က တိုက်တစ်လုံး မှာ ကျွန်တော့်အစ်ကို မိသားစု က ခဏနေတယ် ခဏဆိုပေမဲ့ နှစ် နှစ်လောက် နေသွားတယ် ကျွန်တော်တို့ ခြံထဲ ကတိုက် အသေးတစ်လုံးကလည်း လွတ်နေတာလေ မရီးကလဲ တောင့်တောင့်ဖြူ ဖြူ ကြီး ဆိုတော့ ကျွန်တော်က အမြဲ ဂွင်းမှန်းထု နေရတာပေါ့ ဗျာ သူရေချိုးရင်လည်းဘယ်လို […]